राराबाट प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन–नेपाल बन्छ ! « प्रशासन
राराबाट प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन–नेपाल बन्छ !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल बन्ने कुरामा दुइमत नभएको बताउनु भएको छ ।
के नेपाल बन्छ ? के यो सरकारले हाम्रा सपना पूरा गर्छ भन्ने प्रश्न आफूले पटक–पटक सुन्दै आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘‘नेपाल बन्छ, बनाउनै पर्छ ।
‘हो, हरेक चिजको आयु र अवधिको सीमा हुन्छ । मान्छेको ज्ञान र सामथ्र्यको पनि सीमा हुन्छ । तर इमानको कुनै सीमा हुन्न, निष्ठाको कुनै निर्धारित आयु छैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो–”इमान र निष्ठाका साथ काम गर्न कसैलाई कुनै अतिरिक्त प्रशिक्षणको पनि खाँचो पर्दैन ।”
मुगुको राराबाट देशबासीका नाममा शनिबार बिहान सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुकका समस्याहरु समाधान गर्न सरकार सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै इतिहासले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि अभूतपूर्व अवसर प्रदान गरेको बताउनु भएको छ ।